China Pressure Loka nothango mveliso kunye nabenzi | Hongchang
Pressure ivaliwe nothango lwaso lobhedu
Port: Yantai okanye Qingdao
Pressure uthango, ivaliwe yenziwa usebenzisa uxinzelelo ngamanzi ukutshixa imivalo notched kunye. Inika osecaleni inkxaso egqwesileyo kwaye, jonga kakuhle uhlambulukile. Asinto nako ukuxhasa ubunzima kwemithwalo kwabadlali.
Isicelo ngensimbi nothango lwaso lobhedu
Noludumileyo, intsimi isicelo kunye nokusetyenziswa ngendlela ngentsimbi nothango lwaso lobhedu
Ukuthelekisa nge plate ngokwesindlwane, gratings intsimbi na iingenelo zilandelayo: ubunzima ukukhanya, amandla aphezulu, umthwalo-negalelo elikhulu amandla, ukuba enoqoqosho izinto, umoya kunye nokwamkelwa ukukhanya, fashion mihla non-slip kwaye ekhuselekileyo, ukucoca lula kunye nokufakelwa, ukuba okhule ixesha elide, njl.
Steel nothango ezisetyenziswa kakhulu: power yombane, kwiiplanti zeekhemikali, wokucokisa ioli, imisebenzi zentsimbi kunye intsimbi, mil iphepha, iifektri zokwakha umatshini, mils isamente, ubunjineli kamasipala, unyango amdaka, izityalo amayeza kunye neefektri izinto ezityiwayo.
steel imigangatho nothango
BS4592-1 British: 1995
Dip Hot Galvanizing Standard
BS British 729
Hot-dip galvanizing luhlobo galvanization.It yinkqubo enamathela intsimbi lwaso kunye nezinki Umaleko obhityileyo, ngokugaizhisa intsimbi ngokusebenzisa ibhafu etyhidiweyo zinc kuthetha ukutyabeka ubukhulu 70 μ m xa imivalo yesinyithi asusela 3mm ukuba 5mm ku ubukhulu.
Ukupakisha steel zothango
Zolawulo bundle ngendlela efanelekileyo ukuze handle ngokusebenzisa fork-lift okanye crane intambo: lumbers ezimbini isikwere ezibekwe phezulu nasezantsi esiqhumeni ngokulandelelana. Ezintandathu okanye ezine iibholiti elide M8 okanye M10 angene ngenxa Ekungeneni gratings uwafake panels up.For gratings zentsimbi ke imivalo 3mm lokuzala elingqingqwa, iziqwenga ezine angle sentsimbi ezidityaniswe phakathi imithi esezantsi isikwere kunye lenjongo, ukunqanda ukusuka deformation xa hoisting.Besides, umgangatho sopakisho ekhethekileyo njengemfuneko yoMthengi nazo ziyafumaneka.
Ukufakelwa steel nothango lwaso lobhedu
Kokufaka, iindlela ezimbini eqwalasele zingasetyenziswa welding okanye usebenzisa iiklip yesali, ngokuba ufakelo ezisisigxina non-ezisusiweyo, le gratings intsimbi ezi oku--welding nokuxhasa ngentsimbi. Njengoko ngokuba indawo ukuwelda nceda ubone scheme ngezantsi, ezimbombeni zaso zone panel, i bar amangalele lokuqala oku--welding kwilungu inkxaso kunye 3mm min filet weld x20r min elide. iiklip iinqwelo asukuba, leyo kufuneka eziluncedo ezifana nje ukutshabalalisa zinc yamalahle kwaye kulula ukususa, ziyafumaneka. Iqela ngalinye liya kusebenzisa umboniso ubuncinane ezine iinqwelo Kuba panels ezinkulu umboniso kukhethwa ezimbalwa zisetyenziswa ukulungisa kumalungu zenkxaso ezikhoyo. Xa kukhethwa umboniso yesali, nceda ujonge le theyibhile ilandelayo.
Previous: Pressure welding, nothango lwaso lobhedu
Aluminium Platform nothango lwaso lobhedu
Uhlobo Bar Of Steel nothango lwaso lobhedu
Building Material Steel nothango lwaso lobhedu
Catwalk Platform nothango lwaso lobhedu
Catwalk Steel nothango lwaso lobhedu
Umboniso For Steel nothango lwaso lobhedu
Combined Steel nothango lwaso lobhedu
Composite Steel nothango Platform
Compound Pressure Weld Steel nothango lwaso lobhedu
Compound Steel nothango lwaso lobhedu
Compound Steel nothango Nge oxube Steel Plate
Gratings Steel Compound Nge Ubungakanani Different
Ekhasa Steel nothango lwaso lobhedu
Baqamba Steel Gratings
Floor Steel nothango lwaso lobhedu
Isefu Bar Uhlobo Of Steel nothango lwaso lobhedu
Isefu catwalk Steel nothango lwaso lobhedu
Compound kwalenza Steel nothango lwaso lobhedu
Kwalenza Steel nothango lwaso lobhedu
Isefu Steel nothango Panel
Isefu Steel nothango Standard Size
Isefu Steel Weight nothango
Heavy Duty Steel Floor nothango lwaso lobhedu
Heavy Duty Abahamba Steel nothango lwaso lobhedu
Heavy-Duty Press-Locked Steel nothango lwaso lobhedu
Heavy-Duty welding Bar nothango lwaso lobhedu
Dip Hot Compound kwalenza Steel nothango lwaso lobhedu
Hot kwalenza Steel nothango lwaso lobhedu
I Faka Steel nothango lwaso lobhedu
Mgaqweni Steel nothango lwaso lobhedu
Locked Steel nothango lwaso lobhedu
Low wona aqoqiwe Carbon Steel nothango lwaso lobhedu
Metal Bar nothango lwaso lobhedu
Nobulali Steel Bar nothango lwaso lobhedu
Platform Floor Isefu Steel nothango lwaso lobhedu
Platform nothango lwaso lobhedu
Ingcinezelo Weld Steel nothango lwaso lobhedu
PVC Camera Steel nothango lwaso lobhedu
Abusazinge Steel nothango lwaso lobhedu
Wona aqoqiwe kwalenza Steel nothango lwaso lobhedu
Wona aqoqiwe nothango Platform
Wona aqoqiwe Press-Locked Steel nothango lwaso lobhedu
Wona aqoqiwe Steel nothango catwalk
Uhlobo wona aqoqiwe Steel nothango lwaso lobhedu
Nemilo Bar nothango Round Metal nothango lwaso
Socket Welding Steel nothango lwaso lobhedu
Stainless Bar nothango Decking
Stainless Floor nothango lwaso lobhedu
Stainless nothango lwaso lobhedu
Steel ubezama Grates Steel nothango lwaso lobhedu
Steel Floor Platform nothango lwaso lobhedu
Steel Hlanganisa nothango
Steel uthango, Egypt
Steel Kucingo olubiyele nothango
Steel nothango lwaso lobhedu noFunxomanzi Pit ukuvaleka
Steel nothango lwaso lobhedu Railroad
Steel nothango Houston
Steel nothango Plant
Steel nothango Plateform
Steel nothango Platform
Steel nothango Platform nothango Steps
Steel Size nothango
Steel nothango Abahamba
Steel nothango Weight
Steel nothango Welding Machine
Ulwakhiwo Steel Platform nothango lwaso lobhedu
Abahamba Metal Bar nothango lwaso lobhedu
Kwajika Steel nothango lwaso lobhedu
Waste Water Treatment Plant Platform nothango lwaso lobhedu
Welding, elihamba Nyathela Steel nothango Nge Checker Plate Nosing
Welding Steel Bar nothango, Korea Steel nothango
nothango steel style Plain